Iindaba-Uhlobo olutsha lwePolyquaternium-11 eyandulwe ngokuKhulu
Uhlobo olutsha lwePolyquaternium-11 olusungulwe kakhulu
Uhlobo olutsha lwePolyquaternium -11 Yaziswa
I-Polyquaternium-11 yokuthengisa ine-approx. 20% yomxholo oqinileyo onobunzima obuphezulu beemolekyuli. Ukuhlangabezana neemfuno zentengiso, sazisa iPolyquaternium-11 50%.
IPolyquaternium-11 yityuwa ye-quaternary ammonium yetyuwa eyenziwe kukusabela kwe-diethyl sulphate kunye ne-copolymer ye-vinyl pyrrolidone kunye ne-dimethyl aminoethylmethacrylate. Ikwiklasi yekhemikhali eyaziwa njengequaternary ammonium compounds (ebizwa ngokuba yi "Quat").
Ilifu, ifilimu enombala weenkwenkwezi yangaphambili kunye ne-anti-static agent.Isebenza njengearhente yokujonga imeko kunye nefilimu-yangaphambili, isitayile esincedisayo.Polyquaternium-11 isetyenziswa kwiimveliso zokhathalelo lweenwele ezinje ngee mousses, iigel, iimpompo zokutshiza kunye neepritzes. Ukusetyenziswa kukhathalelo lweenwele ezinje nge-lotion, mousses, gel, sprays, shampoos, kukhathalelo lolusu njengeesepha, ukucheba amagwebu kunye nokuthambisa umzimba. Isebenza njengesixhobo sokulungisa kunye nesitayile somncedisi. Iipolyquatenium-11 iiprocesses zisasazeka, ukutshaja ngombane kuthintela kunye neepropathi zokuthambisa, inikezela ngezibonelelo kubandakanya ukuzinza okuzinzileyo, ubukhulu becala, ukudibanisa okumanzi, ukuthamba, ukubamba, ukuziva okugudileyo kunye nolusu olucekeceke.
CUkuthelekisa nohlobo lokurhweba iPolyquaternium-11 (umxholo we-20%), iPolyquaternium-11 50% enobunzima obuncinci beemolekyuli, ifanelekile ngakumbi ekucoceni / ekuhlambeni kukhathalelo nakwimveliso yeemveliso zokutshiza.
Inkangeleko Kucace gwenxa kulwelo oluncinci lwe-viscous viscous
Umxholo oqinileyo 48 ~ 52%
Ixabiso le-pH (njengoko linjalo) 4.0 ~ 7.0
I-N-Vinylpyrrolidone 0.01% ubuninzi.
Ubuninzi (# 3, @ 6rpm, 25 ℃) I-40,000-100,000 cps
Umbala (APHA) Ubukhulu obungama-120.